दुई दिन सार्वजनिक बिदा, यस्तो छ कारण ! - jagritikhabar.com
दुई दिन सार्वजनिक बिदा, यस्तो छ कारण !
जात्राका लागि बैतडीमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। मेलौली नगरपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै बिहीबार र शुक्रबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
मेलौली–१ स्थित मेलौली भगवती मन्दिरमा बिहीबार र शुक्रबार बलिसहित भव्य जात्रा लाग्ने गर्दछ। बिदाको दुई दिन नगर क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, वित्तीय संस्थालगायतका कार्यालय बन्द रहने नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख,
प्रशासकीय अधिकृत नारायणबहादुर चन्दले बताए। मेलौली भगवती मन्दिरमा लाग्ने जात्रामा बैतडीका साथै छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि दर्शनार्थी आउने गर्छन्। यस्तै सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले पनि बिहीबार एक दिन सार्वजनिक दिने निर्णय गरेको छ।
नगरप्रमुख नरेन्द्रसिंह थापाले एक सूचना जारी गर्दै नगरपालिकाको गढीस्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिरमा बिहीबार कात्तिक शुक्ल चतुदर्शीका दिन जात्रा लाग्ने भएकाले बिदा दिइएको जनाइएको छ।
यता काठमाडाै‌ मा लोकप्रसिद्ध कात्तिक नाच सम्पन्न भएको छ। ८ दिनसम्म पाटन दरबार क्षेत्रमा सञ्चालन भएको नाचको अन्तिम दिन नरसिंहले दैत्यको बध गरेको दृश्य देखाइयो। नाच परम्पराअनुसार एक महिना सञ्चालन गर्ने परम्परा छ।
नाचमा नरसिंह अवतारमा नृत्य गर्नेले दैत्यको बध तान्त्रिक विधिबाट गरिन्छ। ब्यूँझाउने पनि तान्त्रिकबाट नै हुन्छ। नरसिंह भएर नृत्य गर्ने तन्त्र जपेर नृत्य गरेका हुन्छन्।
यसका लागि नुहाइधुवाई गरेर चोखो भई उपवास बस्नुपर्छ। दैत्यलाई ब्यूँझाउने भूमिका तलेजुका पुजारीले गर्छन् । नरसिंह नाचमा कृष्ण मन्दिरका पुजारीले अभिनय गर्ने चलन छ।
अर्को वर्ष एक महिना सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेको कात्तिक नाच संरक्षण समितिले जनाएको छ। अरु नाच तलमाथि भए पनि हरिबोधनी एकादशीमा जलसयन नाच, द्वादशीमा बराह र त्रयोदशीमा नरसिंह नाच तिथिअनुसार नै हुनुपर्ने,
समितिका कोषाध्यक्ष उत्तमरत्न शाक्यले बताए। हरिबोधनीमा नै मधुकैटवको बधको दृश्य पनि देखाइन्छ। यो कथा श्रीस्वतानीमा उल्लेख छ। त्रयोदशीमा हिरण्यकश्यपको भाइको बधको दृश्य र त्रयोदशीमा हिरण्यकश्यपको बधको दृश्य देखाइन्छ।
त्यतिबेला गाउने गीतमा हिरण्यकश्यपलाई बध गर्दा प्रल्हादलाई दिएको दु:ख र प्रल्हादलाई आफ्नो मात्र गुणगान गाउन खोज्ने गीतमा समावेश हुन्छ,’ शाक्यले भने, ‘नाचले सत्यको विजय हुने,
आफूसँग शक्ति हुँदैमा घमण्ड गर्न नहुने र शक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्ने सन्देश दिन खोजेको छ।’मल्लकालमा प्रजालाई नाचमार्फत गीताको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको कोषाध्यक्ष शाक्यको भनाइ छ।
सिद्धिनरसिंह मल्लले नेपाल सम्वत ७६१ मा यो नाचको प्रचलन सुरु गराएको संस्कृतिविद्हरु बताउँछन्। सुरुमा ८ दिन देखाइने यो नाच मल्लका छोरा श्रीनिवासले लोक नाटक बा:थ:प्याँख थपेर १५ दिन पुर्‍याएका थिए।
पछि फेरि श्रीनिवासका छोरा योगनरेन्द्रले माधवनर र उषाहरण गरी १५ दिन थपेर कात्तिक महिनाभरी नाच देखाउने प्रचलन बसाएको बताइन्छ। गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण दुई दिन वराह र नरसिंह अवतारमात्र देखाइएको थियो।